Madaxweyne Mustafe Oo Shaaciyey Sababtii Uu Uga Aamusay Dhallinyaradii Ethiopia Airlines Faquuqday, Kana Hadlay Xasuuqa Gobolka Sitti - Jigjiga Online
HomeSomalidaMadaxweyne Mustafe Oo Shaaciyey Sababtii Uu Uga Aamusay Dhallinyaradii Ethiopia Airlines Faquuqday, Kana Hadlay Xasuuqa Gobolka Sitti
Jigjiga (JigjigaOnline) – Madaxweynaha Dawladda Deegaanka Soomaalida ayaa markii ugu horreysay ka hadlay sababtii ay uga hadli waayeen arrintii buuqa dhalisay ee Ethiopian Airlines kula kacday Arday Soomaali ah oo imtixaan u galay tababar duuliyenimo.
Madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar waxa uu sheegay in haddii ay xukuumaddiisu ka hadli lahayd arrinta dhallinyaradaas in kooxihii u doodayey ay ka aamusi lahaayeen, iyagoo u qaadanaya in xukuumaddu ka jeedinayso boob hantiyeed amaba arrimo kale.
Madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar oo ka hadlayey xaflad lagu dhagax dhigayey waddo Laami ah oo isku xidhi doonta Magaalada Jigjiga iyo Qablaha Harmukaale oo ka tirsan degmada Dambal ee gobolka Sitti ayaa waxa uu sheegay inay ka war hayaan dhibaatada lagu hayo Shacabka Sitti, waxaana uu madashaas uga duceeyey dadka dhibaatadu soo gaadhay.
Madaxweynuhu waxa uu qiray in shacabka Sitti ay ku socdaan weerarro ba’an, ayna u baahan yihiin in hiil lala garab istaago.
“Dhamaanteen aynu u ducayno shacabka Gobolka Sitti oo ay weerarro ba’an ku socdaan oo u baahan inaynu hiil la garab istaagno.” Ayuu yidhi Madaxweyne Mustafe.
Madaxweynuhu waxa uu xusay in hiilkii loo muujiyey dhallinyaradii ay faquuqa iyo takoorka kula kacday shirkadda Ethiopian Airlines, in shacabka gobolka Sitti ay ka mudnaayeen oo ay ahayd in la garab istaago, waxaanu yidhi: “Maalintii dhoweyd dhallinyartii aynu lahayn Ethiopian Airline ayaa ka eexatay waa tii buuqa badan laga dhalinayey ee aadka loogu hiilinayey, taas mid la mid ah waxa ka mudnaa in loo muujiyo shacabka gobolka Sitti ee ay dhibaatadu haysato. Waxa kale oo lanagu durayey, maxay looga hadli la’ yahay arrinta dhallinyarada iyo wixii loo arkayey gacan-bidixayn lagu hayey shacabka Soomaalida. Anigu waxaan aaminsanahay, haddii aanu anagu odhan lahayn waa la gacan-bidixeeyey dhallinyaradaa, qolyaha u dooday way ka aamusi lahaayeen, waxaana la odhan lahaa waxa la galay wax kale oo laynagaga sii jeedinayo dawladdiiye iska aamusa, markaa waxay ku fiicnayd inay iyagu wadaan oo aanu anagu aamusno. Haddii aanu anagu hadli lahayn, waxay odhan lahaayeen waa layna jiho-wareeinayaa oo miisaaniyaddii la boobay ayaa laynaga jeedinayaaye iska aamusa.”
Madaxweynuhu waxa uu shaaciyey in xukuumaddiisu ay kasoo baxayso kaalinteeda ku aaddan weerarrada ay Canfartu ku hayso shacabka Gobolka Sitti, waxaanu bulshada ka codsaday inay hiil la garab istaagaan iyagoo muujinaya isku-duubni iyo Soomaalinimo, waxaanu yidhi: “Imikana waxaanu leenahay haloo hiiliyo walaalaheenna Sitti oo hala garab istaago, isku duubni iyo Soomaalinimo hala muujiyo, xukuumadduna kaalinteedii way kasoo baxaysaa, way waddaa, haddana way ku jirtaa.”